Ahụike na Australia | Njem zuru oke
Ahụike na Australia
Ezigbo Australia | | Australia
N'oge a, anyị ga-arara onwe anyị nye na-ekwu maka ahụike na Australia. Nlekọta ahụike n'Australia na-enye ndị ọrụ nzuzo na ụlọ ọrụ gọọmentị. Mịnịsta na-ahụ maka ahụike na ịka nká, ugbu a bụ Plibersek Tanya, bụ onye na-achịkwa amụma ahụike mba.
Na Australia usoro dị ugbu a, nke a maara dị ka Ahụike, e guzobere na 1984, ma soro usoro ahụike nkeonwe na-ebikọ ọnụ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ejiri ego 1,5% kwụọ ụgwọ Medicare na akụkụ ya, gbakwunyere ụtụ isi 1% ọzọ maka ndị nwere nnukwu ego na-enweghị mkpuchi ahụike onwe ha.
Na mgbakwunye Medicare e nwere Mmemme Uru Ọgwụ nke na-akwado ọgwụ ọgwụ.
Thelọ ọrụ ahụike nke onwe ha na-enweta ego site n'aka ọtụtụ ụlọ ọrụ ịnshọransị ahụike nke onwe. Nke kachasị n'ime ya bụ Medibank n'onwe.
La ndu ishi N’Ọstrelia ọ bụ afọ 79,7 (afọ 77,0 maka ụmụ nwoke yana ụmụ nwanyị 82,4).
Ọnụ ọgụgụ ụmụ ọhụrụ Australia na-anwụ bụ 5,2 n’ime 1.000 ọ bụla. Onu ogugu onwu ogugu umuaka nke Australia bu 3,5 na 1.000. Ọnụọgụgụ nwa ọhụrụ Australia na-amụ nwa bụ 1,7 kwa 1.000.
Ọnụọgụ ọnwụ na Australia bụ ọnwụ 6,7 kwa afọ kwa mmadụ 1.000.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na dịka usoro mmụta ahụike, Australia nọ n'ọnọdụ mbụ maka ibi ndụ ahụike. N'otu aka ahụ, ogo nlekọta dị oke elu.
N'aka nke ọzọ, n'okwu nke ọrịaỌ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị dị ịrịba ama bụ ị smokingụ sịga, ibubiga oke oke, ọrịa AIDS, ọrịa obi, kansa anụ ahụ, na ụfọdụ nsogbu ahụike ọgụgụ isi.
Photo: IPad Diary
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ahụike na Australia
Australian English: Asụsụ obodo Australia
6171de 33e 7084